Green snow: kedu ihe ọ bụ, kedu etu esi akpụ ya yana mkpa ọ dị | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka anyị si mara, mgbanwe ihu igwe bụ ihe zuru ụwa ọnụ nke na-ahapụ anyị ichegbu onwe anyị yana ihe oyiyi dị ịtụnanya. Ma ọ bụ eziokwu ahụ bụ na ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na-arịwanye elu n'oge na-adịghị anya, na-akpata ọnọdụ pụrụ iche. Nyere na otu n’ime mpaghara mbara ala ahụ natara mmetụta ka ukwuu n’ihi mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ Antarctica, ọ bụ ebe a ka ị ga-ahụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ. Taa, anyị na-ekwu maka otu ihe ịtụnanya na-eju ọha mmadụ na sayensị anya. Ọ bụ ihe gbasara acha ọcha snow.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ snow pụtara, kedu njirimara ya na nsonazụ ọ nwere gbasara mgbanwe ihu igwe.
1 Gịnị bụ green snow
2 Green snow na terrestrial albedo
3 Nnyocha banyere algae microscopic na Antarctica
4 Ihe ọhụrụ CO2
Gịnị bụ green snow
Ihe ị nwere ike iche maka mgbe ị nụrụ okwu ahịhịa ndụ, bụ na ahịhịa na-eto eto n'ihi agbaze nke Antarctic snow. Ugbu a, n'ihi ịrị elu okpomọkụ ụwa na-acha ọcha snow na-atụgharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka microscopic algae na-eto eto. Mgbe ọ na-etolite nke ukwuu, ọ nwere snow na-acha akwụkwọ ndụ ma na-eme ka ọ dị ka agba ndụ na-enwu gbaa. A pụrụ ịhụ ihe omume a ọbụna site na mbara igwe ma nyere ndị ọkà mmụta sayensị aka ịmepụta maapụ.
A na-anakọta data niile site na satịlaịtị ndị nwere ike ịhụ ma na-ese foto. Ihe nlebara anya nke ewepuru otutu oge ezumike na Antarctica ka agwakọtara na ihe nlere site na satellites iji nwee ike ịkọwa mpaghara niile ebe a ga-anwale snow na-acha akwụkwọ ndụ. A ga-eji nha ndị a gbakọọ ọsọ nke algae ga-aga n'ihu na-agbasa na kọntinent n'ihi mgbanwe ihu igwe.
Dị ka atụ anya, uto nke algae microscopic a ga - emetụta ike nke ihu igwe na ọkwa ụwa.
Green snow na terrestrial albedo
The terrestrial albedo bụ ọnụ ọgụgụ nke radieshon nke anyanwụ na-egosipụta site n'elu azụ na mbara igwe site na ihe dị iche iche. N'ime ihe ndị a, anyị na-ahụ ebe nwere agba ọkụ, igwe ojii, ikuku, wdg. Snow nwere ike igosipụta ihe ruru 80% nke ihe ikuku ụzarị anyanwụ na ya. Gịnị ka a chọpụtara banyere green snow bụ na albedo data na-ebelata ka 45%. Nke a pụtara na enwere ike ijigide okpomọkụ ọzọ n’elu ala n’emeghị ka ọ laghachi n’èzí.
Enwere ike iche na ebe ọ bụ na albedo dị na Antarctica ga-ebelata, ọ ga-abụ ike na-akpali akpali nke oke okpomọkụ ga-azụ onwe ya. Agbanyeghị, ọ dịkwa mkpa iburu n'uche akụkụ dị iche iche na-emetụta mgbanwe okpomọkụ a. Dịka ọmụmaatụ, uto nke algae microscopic na-amasịkwa absorption nke carbon dioxide site na photosynthesis. Nke a na-enye aka belata ọnụọgụ gasị gasị, nke n'aka nke ya, Ọ ga - enyere anyị aka ịghara ịbawanye okpomọkụ.
Mgbe ahụ, ọ dị mkpa iji nyochaa nguzozi n’etiti ọnụọgụ ọkụ nke Antarctica nwere ike ijigide n’ihi mbelata nke terrestrial albedo, ya na ikike nke microscopic algae iji banye carbon dioxide na ikuku. Dị ka anyị si mara, carbon dioxide bụ ikuku griinụ nwere ike ijigide okpomọkụ. Ya mere, karbon dioxide dị na mbara igwe, a ga-echekwa okpomọkụ ọzọ ma ya mere ọ ga-eme ka okpomọkụ dịkwuo elu.
Nnyocha banyere algae microscopic na Antarctica
Enweela ọtụtụ ọmụmụ e bipụtara na akwụkwọ akụkọ ahụ Nature Communications Ha buru amụma na snow na-acha akwụkwọ ndụ ga-aga n'ihu na-agbasa na kọntinent Antarctic niile. Dika mgbanwe onodu ubochi na eme ka okpomoku nke uwa di elu, anyi ji algae gbasaa.
Ọmụmụ ihe na-egosipụtakwa na Antarctica bụ ebe na-egosi mgbanwe mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-eweta ọsọ ọsọ. Okpomoku a n’eto n’uwa n’uwa a. Ihe omumu ihe omumu ahu gosiputara na na January, edere oku oku na odida anyanwu Antarctica. Okpomọkụ a mere ka ogo 7 dị elu karịa nkezi. Ka usoro kpo oku na-aga n'ihu, ọnụọgụ microalgae ga-arịwanye elu.
Nsogbu bụ na snow enwekwaghị ogologo oge dịka ọ dị na mbụ. Anyi aghaghi iburu n'uche ịrị elu nke oke osimiri nke ga - eme ka agbaze Antarctic zuru oke. Ka a ghota ya nke oma, aghaghi iburu n'uche na isi ihe di iche n'etiti Antarctica na North Pole bu na na Antarctica enwere ala ala n'okpuru ice. Nke a na - akpata na ọ bụrụ na ice agbaze n’elu ala, ọ ga - abawanye n’osimiri. Ihe megidere ya na North Pole. Ihe mkpuchi polar dị n'akụkụ ugwu enweghị mpaghara ụwa n'okpuru ha. N'ihi ya, ọ bụrụ na ice a agbazee ọ gaghị eweli oke osimiri.
Algae nke amuru na Antarctica gbadoro ukwu na mmiri. Nke a bụ n'ihi na ha bụ ebe na-ekpo ọkụ karị ebe ọ bụ na ha nwere okpomọkụ dịkarịsịrị ala karịa naanị ogo ogo. Njupụta nke microalgae na-akwalitekwa ụmụ anụmanụ na anụ nnụnụ. Ma ọ bụ na nsị nke anụmanụ ndị a na-edozi ahụ maka ihe ndị a na-ese foto. Nke ahụ bụ, otu ahịhịa ndị a na - arụ ọrụ dị ka fatịlaịza ma na - atụnye ụtụ na uto ya.
Ihe ọhụrụ CO2
A maara site na ọmụmụ ihe na ọtụtụ ógbè algal dị nso na mpaghara penguuin. Ha nọ n’akụkụ ebe mmadụ ole na ole zuru ike na gburugburu ebe ụfọdụ nnụnụ akwụ́.
Kedu ihe a ga - ahụta dị ka isi ihe dị mma n'ihe a niile, bụ na a ga-enwe ọhụụ ọhụrụ maka CO2 na mbara ụwa. Ebe ọ bụ na algae na-enwe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke photosynthesis, a na-emepụta ike ya n'oge usoro a ma na-etinye gas griin a. N'ihi uto nke algae ndị a, a ga-ewepụta ọtụtụ carbon dioxide na ikuku ma enwere ike ịgụta ya dị ka ihe dị mma. Ihe ohuru ohuru CO2 nwere ike ịdaba na tọn 479 kwa afọ. Onu ogugu a nwere ike karie ebe obu na enwere udiri ndi ozo ndi ozo ndi ozo na nke na-acha uhie uhie nke etinyeghi n'ime ihe omumu a.
Echela na ihe a niile ga-adị mma n’ozuzu ha, ebe ọ bụ na nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe dị oke njọ nke na enweghị ike iwepụ mmetụta a nke snow green.
Na ozi a ha nwere ike ịmatakwu banyere snow na-acha akwụkwọ ndụ na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Green snow